Bazothola imizi yomxhaso abaseMsinga | IOL Isolezwe
Bazothola imizi yomxhaso abaseMsinga
Isolezwe / 15 February 2013, 10:50am / CELANI SIKHAKHANE
UMuzi wakaMchunu uphenduke indlu kathekwane zifikile ikhukhula eMsinga ISITHOMBE: SIBUSISO NDLOVU
ABANIKAZI bezindlu zikanokusho ezicekelwe phansi yizikhukhula ebaThenjini, eMsinga, ngeke baluthole usizo lokulungisa imizi yabo ngenxa yokuthi uhulumeni akanalo uhlelo lokunxephezela imizi ebizayo.
Uhulumeni uhlele ukuthi ahlinzeke laba bantu ngezindawo zokucupha isikhashana baphinde banikezwe nomhlaba abazokwakha kuwo uma sebesesimeni esibavumelayo kwezomnotho.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa nokuBambisana KwaZulu-Natal uMnuz Lennox Mabaso, uthe lolu daba lwakhulunywa nangonyaka odlule ekutheni basuswe kuleya ndawo abakuyo ephezu komfula iSibumba.
“Ngakho okuzokwenzeka ngoba ikhona indawo iNkosi eyanikezela ngayo, sizohlinzeka ngezindlu zomxhaso kubo bonke abakhahlamezekile okuyinto esizoyenza ngokungabheki ukuthi umndeni othile ubunohlobo olungakanani lwendlu. Njengoba laba bantu iningi labo linezindlu ezinkulu ngeke uhulumeni abakhele lezo zindlu kodwa uzobanikeza ezomxhaso okuyizo okuhlinzekwa zona abantu abampofu. Lokhu sizokwenza ngaphansi kwemibandela uma umuntu ehlinzekwa ngomxhaso okuyoba ukubheka ukuthi ngabe umholo wakhe wenyanga uyavuma yini ukuthi ahlomule ngendlu yomxhaso. Uma kungenjalo ikakhulukazi njengothisha abanemiholo engabavumeli ukuthola umxhaso bayohlala kulezi zindlwana zesikhashana esibahlinzeke ngazo baze bakwazi ukuba namandla okuthi bazakhele,” kusho uMabaso.
Uthe ngokomthetho uhulumeni akakwazi ukuthi uvusele umuntu indlu yezigidi esuke icekelwe phansi ngoba alukho uhlelo olunjalo, yingakho umuntu noma ngabe ubenendlu enamagumbi ayishumi kodwa uma esexhaswa unikezwa indlu yomxhaso.
Uthe kubantu baseMsinga bangakugqugquzela ukuthi bahlale kulezi zindlu zesikhashana ababaqubise kuzo ezifakwe ngoLwesithathu kanti bazohlala kuzo kuze kube bathola amandla okuzakhela.
Ukugcizelele ukuthi uma kukhona abasesimeni esibavumelayo ukuthola izindlu zomxhaso bayonikezwa.
Uthe abasebenzi bakahulumeni njengothisha banemihlomulo ebagunyaza ukuzithengela izindlu ngakho abanalo igunya lokuthola izindlu zomxhaso.
Iningi lemizi yaseMsinga ecekeleke phansi isezingeni likanokusho futhi inamagumbi angaphezulu kwayisithupha kanti eminye yayo ngeyothisha.
UMabaso uthe uma umuntu enendlu enkulu noma ngabe usemakhaya kumele ayifake kumshwalense ukuze avikeleke uma icekelwa phansi ngoba uhulumeni akasoze ayivuse.
Wenze nesibonelo ngabanikazi bezindlu ezigudle ulwandle eThekwini nasePort Shepstone abadilikelwa imizi yezigidi kuhlasele amagagasi kodwa abayikhokhanga ngenxa yokuthi uhulumeni akakwenzi lokho.
Umphakathi waseMsinga ngesikhathi ukhuluma ne-Solezwe ukugcizelele ukuthi nakuba uthanda ukusuka kule ndawo kodwa ubhekene nenkinga yokuthi awukaze uyalelwe ukuthi uzoyiswa kuphi futhi uzoxhaseka kanjani.
Kulezi zikhukhula kumuke abantu abayisithupha okunguMnuz Nehemiah Mhlongo nabangani bakhe ababili abasindile, namalungu omndeni wakwaDlamini amathathu kodwa okusatholakale elilodwa.